Digital ese foto Data Recovery - Naghachi videos / foto site na igwefoto
> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Data si Digital ese foto
Data mgbake on a igwefoto dijitalụ?
M nwere foto iwere nke m na enyi, na m mere nyefee ya na kọmputa tupu m ehichapụ kwụsịrị igwefoto, ma ọ na-arahụ site na kọmputa mere ọ dịghị na-ya na ụzọ. Na-e n'ebe ọ bụla m nwere ike na-aga na foto azụ? N'eziokwu, ugbu a m na-adịghị na-eche banyere price, m nnọọ chọrọ na foto azụ. Ọ pụtara na otutu m. : /
Igwefoto bụ ihe Aiptek DV3100, na igwefoto dịghị mgbe ukwuu ojiji nke ya Ko, ma amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ iji akpagbu ya Ko. Enyemaka. :(
Ị nwere ike ọchị ugbu a :) Digiral igwefoto data mgbake pụrụ inye aka na-azụ gị furu efu photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ, n'agbanyeghị na ị na-efu ha ruru nhichapụ, format, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka ngwaọrụ nrụrụ aka na keerughi. Ị mgbe bufee foto gị na kọmputa site na igwefoto dijitalụ, otú i nwere ike na-agbalị iji naghachi ya ma obu site na kọmputa gị ma ọ bụ igwefoto. Ma bụ otu, dị ka ogologo oge ha na-adịghị overwritten site ọhụrụ foto ma ọ bụ faịlụ.
N'izo aka overwriting, nke a bụ dị oké mkpa: Ị na-eji gị igwefoto na-ọhụrụ photos, kpọmkwem na nchekwa kaadị etinyere na igwefoto. Na adịghị azọpụta ọhụrụ data ka nkebi ebe ị furu efu gị photos na kọmputa. New faịlụ ga iwerekwa ohere na gị furu efu photos ji na-overwrite ha. Na okwu ọzọ, ịga nke ọma nke na igwefoto dijitalụ foto mgbake na-adabere na nchebe nke gị kaadị ma ọ bụ disk, ka a nnukwu ịgbatị.
Olee otú naghachi data si dijitalụ ese foto?
Na-azụ gị furu efu foto site na igwefoto, ị chọrọ iji nweta a igwefoto data reovery software mbụ. Wondershare Photo Recovery Nwere ike-ezi nhọrọ (ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac ma ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS X), nke na-akwado mgbake nke photos dị iche iche formats, nakwa dị ka music na video na ọtụtụ usoro. Ọtụtụ ihe, ọ dị mma ma dị mfe iji.
I nwere ike ịgbalị free ikpe version n'okpuru iṅomi gị furu efu photos tupu ị na-akwụ maka ya. Dị nnọọ na a na-agbalị! Ị nwere ike rụchaa ọrụ a na ọtụtụ nwa nzọụkwụ.
Mkpa: Unu ibudata na wụnye a igwefoto data mgbake software na disk ma ọ bụ nkebi ebe ị furu efu gị photos.
3 nzọụkwụ mezue igwefoto dijitalụ foto mgbake
Ka na-na Photo Recovey maka Windows dị ka a na-agbalị na-eme ndị igwefoto data mgbake nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Step1. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi furu efu foto site na gị igwefoto, i kwesịrị jikọọ gị igwefoto ma ọ bụ nchekwa kaadị nke ya na kọmputa. Ọ bụrụ na chọrọ iji naghachi efu foto site na kọmputa gị, dị nnọọ pịa "Malite" na-aga n'ihu.
Step2. Họrọ ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị jikọọ gị igwefoto na pịa na "iṅomi" na-ahụ gị furu efu foto site na ya. Bụrụ na ọ bụghị ngwaọrụ, biko họrọ nkebi ebe ị furu efu gị foto na kọmputa, na-aga "iṅomi".
Step3. Mgbe Doppler, niile recoverable faịlụ na-hụrụ, gụnyere ọdịyo faịlụ, foto na vidiyo. Iji nweta furu efu photos, ị nwere ike ozugbo gaa "Photo" Atiya, ịhụchalụ ha otu otu na ego na-"Naghachi" ha.
Ihe i kwesịrị ntị bụ: Unu ịzọpụta natara photos na mbụ disk ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ, n'ihi ọhụrụ faịlụ ga overwrite furu efu faịlụ. Ọ bụrụ na e ọ bụla faịlụ efu, ị ka nwere ohere nke abụọ ka iṅomi na-agbake ha.